पार्टीमा कस्ले निम्त्यायो यस्तो समस्या ? -
पार्टीमा कस्ले निम्त्यायो यस्तो समस्या ?
प्रदेश ३ प्रमुख राजनीति
२४ असार २०७७, बुधबार १२:१२ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on पार्टीमा कस्ले निम्त्यायो यस्तो समस्या ?
अधिकांश नेता र सम्पूर्ण कार्यकर्ताले सरकारको गति र पार्टीको मति नबिगार्न प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवालयसम्मलाई अनुनय विनय गरेका छन् । तर, नेकपाको सर्वशक्तिमान नेतृत्वको चाल भागबन्डा र गुटको वरपर झुमेर गुठबन्दीलाई सर्वोपरी ठान्दै छ । पार्टीको इज्जत छैन । सरकारको कामलाई पार्टीको अपनत्व दिने सर्वस्विकार्य निर्णय छैन । देशको अवस्था गएगुज्रेको छ । विकासका नाममा बजेटको विनास भएको छ । सडकमा सरकारको कमीकमजोरी छताछुल्ल भएका छन् । कोरनोको नाउँमा मच्चाइएको ब्रह्मलुटको भाइरसलाई बचाउन प्रधानामन्त्री आफैँ लागिपरेका छन् । आफ्नै समृद्धि र गुटको विकासलाई जनताको बहुदलीय जनवादले घिसार्दै फोहरको थुप्रोमा पु¥याउँदासम्म पार्टी र कार्यकर्ताको आस्था र विश्वासमाथि भएको प्रहार हटेको छैन । यो बेला गल्तीलाई सुधार्ने हो, पद खोस्ने होइन । अन्तर्संघर्ष चर्कनु नराम्रो होइन ।
नेताको रहर कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनोस् भन्ने थियो । जसले सरकारको ठूला नेतृत्व गर्छ, उसको हृदय खुला हुनु पर्छ । ठूलो छाती, उदार भावना नेकपामा देखिएन । संसदीय विकृतिले गठबन्धन सरकार बनाउने र ढाल्ने गर्दा विकासको चरण ठप्प हुन्छ विकासको बाटोको पत्तो छैन । सम्भावनाको स्थिति के छ बुझ्दै नबुझी पानीजहाज, मेट्रो रेल, मोनोरेलका किम्वदन्तीले स्थान पाए । रेलको टिकट काट्न लगाउनेजस्ता फतुर बोली रोस्ट्रमबाट फैलियो । पदीय मर्यादा जनताको अपेक्षाको कुरा बिर्सेर दल विभाजन गर्ने अध्यादेशसमेत आए । संसद बैठक कसैको सुझावबिना स्थगित भयो । राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन चाल गरेका छन् । गुटले पृथ्वी धान्ने भए, नेतृत्व चाहिँदैन । बोकाले दाइँ गर्ने भए गोरु चाहिँदैन भन्नेतर्फ श्री ३ बनेकाहरुको ध्यान गएन । समस्याको जडा त्यही हो ।
अहिले पार्टीको खाँटी विवाद भनेकै प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको गुटप्रेम निर्णय हुन् । पार्टीलाई बाइपास गर्ने त्यही पार्टीको शक्तिले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भएका नेताहरुले एकीकृत पार्टीको संरचनाले पूर्णता नपाउँदासमेत ध्यान दिएनन । ओली सरकारले गरेका कुनै निर्णयमा पार्टी सहभागी भएन किनकि उनले पार्टीमा छलफल गरेका छैनन् । पार्टी प्रधानमन्त्रीका निर्णयको दर्शक बन्यो, राष्ट्रिय स्वार्थमा राज्यले सफलता पाएन । विश्व महामारीको रुपमा यो बेला कोरोना आतंक छ । सरकारको असहयोगले प्रदेश सरकारहरुले आशंकित मान्छेको पिसिआर रिपोर्ट टेस्ट गर्न पाएनन् । रु.१० अर्ब खर्चेर न त क्वारेनटाइनमा भरपर्दो संरचना बन्यो न आइसोलेसन हब नै । आफैँले बोलेका कुरामा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएका छ्रैनन् । उनलाई देवत्वकरण गर्नेले सडकमा लज्जित जुलुस निकाले । कोभिड–१९ को महामारीको नियन्त्रणमा स्वास्थ्यमन्त्री असफल भए । प्रधानमन्त्रीले चिकित्सकहरुको विश्वास जित्ने सकेनन् । यस्तो महामारीमा पनि भ्रष्टाचार गर्न नछाड्ने मन्त्री र नेताको धरातल खस्किँदै छ । कम्युनिस्ट पार्टीको चाल खायो, पियो, बराजुले देखायो गयो भनेजस्तो भयो । के नेकपाको निर्वाचनको घोषणापत्रको आधारमा वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो त ? किन गल्ती स्विकार्दैनन् प्रधानमन्त्री र उनका गुठियारहरु ? के सरकारले गल्ती गरेकै छैन, प्रचण्ड, माधव, वामदेव र झलनाथले मात्र गल्ती गरेका हुन् त ?
नेकपालाई जनता चाहिएका ०७४ साल मात्र हो ? अब चुनाव आउँदैन, एकीकृत पार्टी फुटाएर राजस्व लुट्ने सबै हुन्छन् चनाुवमा खट्ने कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति गाउँ, बस्तीमा छ । सहरमा भोकभोकै छन्, रोजगारी गुमाएका छन् । स्वार्थ पूरा गर्न सियो हुने स्वार्थ पूरा गरेपछि हात्ती बन्नेलाई गुटले रुचाउला नेपाली जनताले ? पार्टी विभाजन नेपाली जनताको माग होइन, नेकपाको योजनामा जनता ढाँट्ने, राष्ट्रको ढुकुटी सक्ने तर नीतिगत सूत्र छैन । सरकार बनेको दुई वर्ष पाँच महिना पुग्दानपुग्दै पार्टी फुटाउने रहर गर्नेलाई जनताले माफ दिँदैनन् । पदको स्वार्थले राजनीति बद्नाम भएको छ । सर्वपक्षीय बहसले समस्या हटाउने जुक्ति निस्कन्छ । सत्यलाई ढाकछोप गरेर असत्य लुक्दैन, लुक्न पनि सक्दैन । सत्यको साक्षी कार्यकर्ता र जनता हुन गुटवादी चिन्तन होइन । अबको बाटो भनेकै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट मन्त्री हटाउने पार्टीको कमान्डमा राज्य चलाउने हो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, स्वाथ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतजस्ता असक्षमलाई बिदा गर्दै फ्रेस युवाहरुलाई सरकारमा ल्याउने हो । यहाँ युरोपेली युनियनका एजेन्टका रुपमा परिचित सुभाष नेम्वाङ, अग्नी खरेलहरुबाट समस्या समाधान हुँदैन । सहमति इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । एकताका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याँउदै नेताहरुको कार्य विभाजन हुनुपर्छ । मै ठूलो, मैले भनेको मात्र ठिक भन्ने अहंकारी रशैयाले नेकपाको स्थिति नाजुक भएको सबैले बुझ्नु पर्दछ । एकताको सूत्रलाई भत्काउने आँट गर्नेले ०५४ को मालेको हबिगत हेरे हुन्छ ।
अब आस पनि रहेन, चासो पनि भएन
अर्को जंगेको आवश्यक
को बन्लान त राष्ट्र बैंकको गभर्नर ? खनाल, अधिकारी र शिवाकोटी सिफारिस
२४ चैत्र २०७६, सोमबार ०६:३५ Tamakoshi Sandesh
ट्रमा सेन्टरमा सोचनाको दादागिरी
२३ पुष २०७६, बुधबार ०३:०७ Tamakoshi Sandesh
माधव पक्षका समानुपातिक सांसदको पद जोखिममा
११ चैत्र २०७७, बुधबार ०५:१५ Tamakoshi Sandesh
हाकिमहरुले किन करारका कर्मचारीलाई बढी च्याप्छन् होला ?
भक्तपुर घर भए हुँदैन सरुवा !
गृह सचिवको ज्यादती, मारमा कर्मचारीहरू
कार्यालयको सामान खरिदका नाममा अर्बौंको भ्रष्टाचार
ज्वाला संग्रौलाको जन्मदर्ता र अविवाहिताको प्रमाणपत्र नै नक्कली
मुद्रण विभागका महानिर्देशकको ‘ध्रुवे’ प्रवृत्तिले कर्मचारी आतङ्कित !
ईश्वरको योजनामा विश्वलाई बाइपास थपिए आइजिपीका दाबोदार
नियुक्तिमा झापाली मोह
युनियनप्रति धारे हात लगाउनु चिन्ताको विषय
अन्तरराष्ट्रिय कर प्रणालीको अध्ययन गरी कर प्रणालीमा गर्नु पर्ने सुधारको सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने काम भइरहेको छ
स्थानीय सरकार र वन
ओली सरकार ढलेपछि राहत महसुस
ओली सरकारका सम्झनलायक उपलव्धी
बजारमा १५ प्रतिशत खाद्यान्न न्यून गुणस्तरीय छ
पार्टी अध्यक्ष नबन्ने भएपछि दिए भीम रावलले राजीनामा